Kor U Qaadista Madaxwaynaha DDSI Iyo Micnaha Wayn Ee Ay Xanbaarsantahay - Cakaara News
Kor U Qaadista Madaxwaynaha DDSI Iyo Micnaha Wayn Ee Ay Xanbaarsantahay
Jigjiga(CN) Arbaco.March.18.2015, waxaa warbaahinta iyo barta internetka ee facebook-ga aad uga muuqata sidii ay usoo dhaweeyeen qurba joogta Minneapolis madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo kor loogu qaaaday gacmaha boqolaal qurnajoog ah oo garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha Minneapolis-Saint Paul International Airport kusoo dhawaysay.
Hadaba macnaha wayn ee ay dadku ka fahmayaan meeqaanka soo dhawaynta sare ee madaxwaynaha DDSI ayaa laga garan karaa inaysan iska iman balse waxaa meesha ka muuqata in qurbajoogta tirada intaas dhan aan qasab cidina ku kasban iyo wax kale toona laakiin waxa kaliya ee lagu kasbaday uu yahay waxqabadka iyo isbadalka uu madaxwaynuhu hirgaliyay.
Qurbajoogta ayaa iyagu maskaxdoodu raacday horumarka oo tusaale loo soo qaadan karo biyaha iyo adeegyada kale ee shacabka iyo deegaanka laga wado taasoo ay bulshadu u baahan tahay , waxaana meesha ka baxday marin habaabintii iyo mugdigii ay UBBO qurbajoogta ku hoddaysay ee waliba shacabka lagu dhibaatayn jiray haday tahay dilka iyo haday tahay horumarka oo laga soo horjeedsado.
Qurbajoogta ayaa hada iyagu iskood kaalin libaax uga qaata ilaalinta danta shacabka iyo xoojinta hawlaha horumarka dalka. Kuwaas oo la odhan karo waa awood ciidan horumarineed oo qurbaha kusugan islamarkaana isbadalka wadanka baal dahab ah kaga jira.
Ma aha Qurbaha oo kaliya balse waxaa iyaguna madaxwaynaha DDSI xidhiidhka dhaw ee iyo meeqaan sare u taagan yahay shacab waynaha xoolo dhaqato beeralayda ah ee deegaanka kuwaas oo uu si dhab ah uga warhayo xaaladooda nololeed isagoo waliba miyaga ula cawa gala iyo goobaha ay kusugan yihiin.